Ethiopia oo shaacisay fulinta arrin xiisad dagaal ka abuuri karta gobolka - Caasimada Online
Home Warar Ethiopia oo shaacisay fulinta arrin xiisad dagaal ka abuuri karta gobolka
Ethiopia oo shaacisay fulinta arrin xiisad dagaal ka abuuri karta gobolka
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo uu khilaaf xoogan ka dhexeeyo dowladaha Ethiopia iyo Masar ayaa waxaa soo baxaaya in Dowlada Ethiopia ay wado qorsho ay quwada korontada ugu dhoofineyso dalka Masar.
Bizuneh Tolcha oo ah Madaxa warfaafinta iyo xiriirka dadwaynaha ee wasaarada Biyaha, korontada iyo waraabka Ethiopia ayaa sheegay in dhamaad uu maraayo qorshaha ay quwada korontada ugu dhoofinayaan dalka Masar.
Bizuneh Tolcha, waxa uu sheegay in Dowlada Ethiopia ay awood u leedahay in quwada korontada ay gaarsiiso dhammaan dalalka Africa waxa uuna carab dhabay in mustaqbalka dhow magaalada Addis Ababa ay noqon doonto halka laga maamulo korontada Africa.
”Bixinta korontada Ethiopia waxaan ka bilaabi doonaa Masar, waxaa jir qorsho kale oo aan dooneyno in mustaqbalka dhowr korontada ku gaarsiineyno dhammaan dalalka Africa”.
Mr Bizuneh Tolcha, ayaa sheegay in iminka Ethiopia ay diyaarinayso qaabkii quwada korontada u gaarsiin lahayd Masar kadib markii ay Masar muujisay rabitaanka arintaas ku aadan.
Mas’uulkaani waxa uu arrin sahlan ka dhigay khilaafka ka dhexeeya Dowladaha Ethiopia iyo Masar waxa uuna tilmaamay in Dowlada Ethiopia ay u muuqato inay hirgaliso rabitaankeeda.
Dhinaca kale, khilaafka labada dal ayaa salka ku haya dhismaha biyaxidheenka weyn ee Abay.
Wararka cayaaraha kala soco WWW.GOOL.NET
Asad Cabdullahi Mataan - June 14, 2021
Somalia's foreign minister has invited Kenya to reopen its embassy in Mogadishu in a push to resume full diplomatic ties, in a note seen...
Ghana ex-president Mahama quits as African Union Envoy to Somalia
English May 21, 2021